Magaalo lacag kugu siineysa inaad ku safarto baaskiil | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Magaalo lacag kugu siineysa inaad ku safarto baaskiil
Magaalo lacag kugu siineysa inaad ku safarto baaskiil
Posted by: Mahad Mohamed February 24, 2019
Himilo FM –Dowladda hoose ee magaalo dhacda koonfurta Talyaaniga ayaa siinaysa muwaadin kasta lacag dhan 250 Euro oo u dhiganta 283 doolar haddii uu adeegsanayo baaskiil halkii uu raaci lahaa mooto ama gaari.
Tani waxay qeyb ka tahay mashruuc cusub oo dhaqan galaya 25-ka bishan Febraayo islamarkaana looga dan leeyahay in lagu dhiira geliyo isticmaalka baaskiilka.
Magaalada Bari oo katirsan gobalka Puglia ee Talyaaniga ayaa tallaabo horay u qaaday si loo dhiira geliyo nolol caafimaad leh iyo deegaan wanaagsan.
Mashruuca oo cinwaan looga dhigay “ ku wanaagsan deegaanka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada” ayaa waxaa qofka heysta baaskiil soo maray gacanta labaad la siinayaa 100 Euro halka 150 la siinayo dadka heysta baaskiil cuisub sida warbixin lagu sheegay.
Antonio Decaro oo ah guddoomiyaha magaalada ku dhawaaqday mashruuca cusub ayaa sheegay in ujeedkooda uu yahay in la kordhiyo isticmaalka baaskiilada gudaha magaalada muddo sannad gudaheed.
Dadka adeegsada baaskiilka markay ka tagayaan xaafadaha oo ay u socdaalayaan shaqooyinka ama dugsiyada waxaa lacag ahaan loo siinayaa 20% km kasta halka kuwa u isticmaala arrimo kale leeyihiin 4% km kasta.
Masaafada uu qofka ku safro isaga oo adeegsanaya baaskiil waxaa lagu oggaan doonaa qalab lagu xerayo baaskiilka.
Previous: Marcelo oo baxaya dhammaadka xilli ciyaaredkan!
Next: Nasser Al-khelaifi oo sheegay in Neymar uusan iib aheyn
Japan oo dagaalka Covid-19 u adeegsaneysa gafuur xir qiimihiisu yahay $9600
La Kulan: Ninka halka lug ku kaxeeya Baaskiilka
Yurub oo heshiis la xiriira tallaalka Covid-19 la gashay Moderna